Thomas Dekker wuxuu ku dhuftey Dahab dahab argagax leh "Jack Goes Home" - iHorror
Filimooyin naxdin leh
Dib u eegista Muuqaalka
Musalsallada Taxanaha ah
Buugaag naxdin leh
Waxyaabaha Naxdinta Leh
Dembi run ah
Naxdinta Cilmu-nafsiga (xiisaha)
Muuqaal la helay
Yaab leh oo aan caadi ahayn
Bandhigga Filimka iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Thomas Dekker wuxuu ku dhuftey Dahab dahab argagax leh "Jack Goes Home"
Warar Naxdin LehNaxdinta Cilmu-nafsiga (xiisaha)
Thomas Dekker wuxuu ku dhuftey Dahab dahab argagax leh "Jack Goes Home"
by Waylon Jordan October 12, 2016
Jack Guriga Ayuu Tagaa waxay u egtahay cinwaanka majaajillo jaceyl ama riwaayad wanaagsan oo ku saabsan safarka nin ee dib ugu noqoshada xididdadiisa si uu isu helo. Markuu halkaas gaaro, wuxuu heli doonaa koox dad ah oo jecel oo doonaya inay kobciyaan riyadiisa oo ka caawiyaan inuu noqdo nooca ugu fiican ee naftiisa uu noqon karo. Waa mid ka mid ah filimada kaa tagaya inaad dareento farxad iyo dhammaystirnaanta markay dhibcaha soo rogaan.
Taasi waa MA filimka uu sameeyay Thomas Dekker. Taabadalkeed, sida inta kale ee maskax-xumida maskaxeed, cinwaanku waa dhagar.
Markuu filimku furmayo, Jack Thurlowe (Rory Culkin) wuxuu ku socdaa nolol maalmeedkiisa markii taleefan laga soo waco. Waalidkiis waxay kujireen shil gaari. Aabihiis waa ladilay, laakiin hooyadiis (oo ay garaacday Lin Shaye isbarbar dhiga), inkasta oo ay kuuskuus iyo nabaro leeyihiin, way badbaaday. Goor dhow ayuu ku sii jeedaa gurigiisa si uu ugu ekaado hooyadiis oo uu u sameeyo qabanqaabada aaska aabihiis. Taasi waa xilliga ay dhibaatadiisu runti bilaabmayso.
Waxa soo socdaa waa safar gaabis ah oo gubasho ah oo la soo dhaafay maadaama Jack uu waji ka waji u wajahayo dhacdooyin laga soo bilaabo yaraantiisii ​​oo uu muddo dheer tan iyo markii la cadaadiyay Markay riyooyinkiisu bilaabeen inay duulaan xaqiiqadiisa, adduunkiisu wuxuu si waali ah ugu wareegaa kantaroolka.
Culkin wuxuu siiyaa waxqabad qurux badan lakab ahaan sida Jack, cayriin iyo nugul maadaama maskaxdiisa banaanka la dhigay. Muujin kasta oo timaadda ayaa beddeleysa isaga iyo jilaaga ayaa diiwaangelinaya isbeddelka ku yimid jirkiisa oo dhan. Ma hubo in aan waligay arkay Culkin oo sifiican u soo bandhigaya. Waxa aan ku kalsoonahay ka dib markaan daawaday filimkaan ayaa ah inaan ka filan karno inuu qabto doorka hogaaminta marar badan mustaqbalka. Kaliya maaha inuu sifiican u karti badan yahay, laakiin wuxuu leeyahay awoodaas asalka ah ee uu kuqancin karo dhagaystayaashiisa inay raacaan dhaqdhaqaaqiisa shaashadda.
Ka dibna, waxaa jira Lin Shaye. Shaye waa Meryl Streep-ka adduunka naxdinta leh waxayna caddeyneysaa, haddana markale, in ay tahay xoog lagu tiriyo doorka Teresa, Jack hooyadiis. Hal mar waa hooyo nugul oo jacayl badan tan xigtana waxay ku karisaa cadho iyo rabshad. Sidee ayay u qabataa taas la rumaysan karo iyo sida fudud ee muuqata waxay u tahay wax qarsoodi ah sida haweeneyda ay ciyaareyso
Dekker wuxuu jilayaa jilaayaasha jilayaal badan iyo jilayaal karti badan. Daveigh Chase (aka Samara in Wajiga) wuxuu ku ifinayaa doorka saaxiibka ugu fiican ee Jack, iyo Louis Hunter oo wax qariya sida Jack's sexy deriska deriskiisa oo laga yaabo ama uusan laheyn ujeedooyin xun. Si dhow u fiiri sidoo kale waxaad ka arki doontaa Nikki Reed ka Twilight xayeysiinta iyo shaqadeeda dhow sida Betsy Ross on Fox's Sleepy Hollow.
Laakiin hibadaas oo dhami waxba tari mayso iyada oo aan shaqo la yaab leh daaha gadaashiisa laga daawan. Qoraalka Dekker iyo jihada ayaa dhagaystayaasha ku qiyaasaya, waligoodna ma bixinayaan aasaas adag oo ay ku istaagaan. Wuxuu si xeeladeysan inoogu dhaqaajiyaa xaqiiqda una wareejiyaa dhalanteed oo wuxuu mar kale dib ugu noqdaa sida qaybo dusha shaashadda. Argagixisada filimka ka jirtaa waa mid dhab ah, oo tan ugu xunba, waa mid aan laga gudbi karin.
Oo ay weheliso dhibcaha ceebaynta ee Ceiri Torjussen iyo filimka muuqaalka ah ee Austin F. Schmidt, kani waa filim aanad rabin inuu ku seego.
Jack Guriga Ayuu Tagaa laga sii daayo shineemooyinka iyo VOD Oktoobar 14, 2016 laga bilaabo Momentum Pictures. Hubi liisaska maxalliga ah oo arag filimkan ASAP! Filimkan waa hal duuf oo shucuur shucuur leh oo runtii u qalma in la safro.
Jack Guriga Ayuu TagaaLin ShayeRory KulkinThomas DekkerWaylon Jordan
Waylon Jordan waa taageere nololeed oo dhan sheekooyinka sheekooyinka iyo filimada gaar ahaan kuwa leh curiye ka sarreeya. Wuxuu si adag u aaminsanahay in argagaxa uu ka tarjumayo cabsida wadajirka ah ee bulshada loona adeegsan karo aalad loogu talagalay isbedelka bulshada
"Farshaxanka" wuxuu la kulmay "Micnaha Gabdhaha" ee loo yaqaan "Givertaker" gaaban
boostada soo socota
26 FILMS SI WAQTI LEH LOOGU SOO DIRAY FILMS HORROR SI AAD U DAAWATO HALLAAYE
Baadh makhaayadaha Select Category Amazon (filim) (7) Amazon (taxane ah) (11) AppleTV + (4) Blu Rays (8) Qosol cabsi (48) Majaajillo (13) Waxyaabaha Qabow ee Iibsashada (4) Facebook (taxane) (1) Khayaali (43) Fiidiyowyo La Helay (28) Gore (24) HBO (aflaan) (6) HBO (taxane) (7) Buugaagta naxdinta leh (58) Wararka madadaalada naxdinta leh (10,771) Filimooyin cabsi leh (311) Taxanaha naxdinta (81) Subgenres naxdin leh (10) Hulu (taxane) (5) Wareysiyo (filim) (38) Wareysiyo (taxane ah) (4) Qorno Horror (42) Liisaska (filimada) (38) Liisaska (taxanaha) (2) Suuqa (19) Bahal Argagix (9) Faallooyinka filimka (55) Filimaan (14) Muusig (36) Netflix (filim) (29) Netflix (taxane ah) (32) Khayaali (4) Paranormal (75) Naxdinta Cilmi-nafsiga (xiisaha) (52) Dib u eegista Taxanaha (9) Shudder (filim) (46) Shudder (taxane) (15) Slasher (4) Qariib ah oo aan caadi ahayn (36) Filimaanta Daabacaysa (78) Taxanaha qulqulka (37) Ciyaaraha (2) Trailer (filim) (233) Riwaayad (taxane) (43) Dambiga run ah (46) Ciyaaraha fiidiyowga (181) YouTube (filim) (3) YouTube (taxane ah) (11)
Filimka cusub ee 'Chucky' Trailer wuxuu u keenayaa Mehem Halis ah ...
'Ciidanka Tuugada' Trailer-ka 'Trailer Trailers' Ayaa Dib Nagu Soo Celiya Kahor ...
Xilliga 'Dexter' Xilliga 9 wuxuu Helaa Isjiidasho, Cinwaan iyo Ciyaar ...
Trailer-ka 'Tailgate' ayaa kaa cabsiin doona ...
David Lynch's 'Dune' Oo U Imaanaya Xaddidan Xaddiga 4K ...
@ 2021 - Dhammaan Xaquuqda ayaa la keydiyay.
Websaydkani waxay isticmaashaa cookies si loo wanaajiyo khibradaada Waxaan kugula talinaynaa in aad arrintaan saxan tahay, laakiin waad ka-bixi kartaa haddii aad rabto. Ogolaanshaha Read More